China ukuncela ipayipi ifektri abakhiqizi | I-Kangyuan
• Yenziwe nge-PVC yezinga lezokwelapha elingenabuthi — ebala, futhi ethambile.
• Amehlo asemaceleni aqediwe ngokuphelele futhi avale ukuphela kwe-distal ukulimala okuncane kulwelwesi lwama-tracheal mucous.
• Isixhumi sohlobo lwe-T nesixhumi esiyindilinga siyatholakala.
• Isixhumi esinekhodi yokuhlonza osayizi abahlukene.
• Ingaxhunyaniswa nezixhumi ze-Luer.
Ukupakisha: Ama-100 pcs / ibhokisi, ama-pcs ayi-600 / ibhokisi
Usayizi webhokisi: 60 × 50 × 38 cm
Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukufisa isikhwehlela emitholampilo.
Lo mkhiqizo wakhiwa nge-catheter nesixhumi, i-catheter yenziwa ngezinto zebanga lezokwelapha i-PVC. Ukuphendula kwe-cytotoxic komkhiqizo akukho ngaphezu kwebanga 1, futhi akukho ukuzwela noma ukusabela kwe-mucosal stimulation. Umkhiqizo uzobe uyinyumba futhi, uma ufakwa inzalo nge-ethylene oxide, awuyikushiya ngaphezu kwe-4mg.
1. Ngokwezidingo zomtholampilo, khetha imininingwane efanelekile, vula isikhwama sokupakisha sangaphakathi, hlola ikhwalithi yomkhiqizo.
2. Ithiphu lepayipi lokumunca isikhwehlela lalixhunywe ku-catheter yokudonsa ingcindezi engemihle esikhungweni somtholampilo, futhi ukuphela kokhokho wokudonsa isikhwehlela kwafakwa kancane kancane emlonyeni wesiguli endleleni ukuze kukhishwe isikhwehlela nezimfihlo emgodleni.
Akukho ukuphikisana okutholakele.
1. Ngaphambi kokusetshenziswa, imininingwane efanele kufanele ikhethwe ngokuya ngeminyaka nangesisindo, futhi ikhwalithi yomkhiqizo kufanele ihlolwe.
2. Sicela uhlole ngaphambi kokusetshenziswa. Uma umkhiqizo owodwa (ogcwele) utholakala unezimo ezilandelayo, akuvunyelwe ukusebenzisa:
a) Usuku lokuphelelwa yisikhathi lokuvala inzalo ；
b) Iphakethe elilodwa lomkhiqizo lilimele noma linodaba lwangaphandle.
3. Lo mkhiqizo ungowokusebenzisa isikhathi esisodwa emitholampilo, uqhutshwa futhi usetshenziswe ngabasebenzi bezokwelapha, futhi ubhujiswe ngemuva kokusetshenziswa.
4. Esikhathini sokusetshenziswa, umsebenzisi kufanele aqaphe ngesikhathi ukusetshenziswa komkhiqizo. Uma kunengozi, umsebenzisi kufanele ayeke ukusebenzisa umkhiqizo ngokushesha futhi abezokwelapha babhekane kahle nawo.
5. Lo mkhiqizo inzalo ye-ethylene oxide, isikhathi sokuvala inzalo seminyaka emihlanu.
6. Ukupakisha kulimele, ngakho-ke ukusetshenziswa akuvumelekile.
Gcina endaweni epholile, emnyama futhi eyomile, izinga lokushisa akumele liphakeme kune-40 ℃, ngaphandle kwegesi elonakalisayo nomoya omuhle.
Umkhiqizi: I-HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Langaphambilini Alahlwayo Endotracheal Tube Kit
Olandelayo: Umgogodla Wokungena Ngokuncela Ukusetshenziswa Okukodwa
PVC ukuncela ipayipi
ukudonsa ifektri ye-catheter
umenzi we-catheter wokudonsa
ukudonsa umphakeli we-catheter
Alahlwayo Endotracheal Tube Kit